Ọhụụ ìhè LED nke 120W na-agba ọsọ China Manufacturer
Nkọwa:Mgbanwe igwe di omimi nke ya,Mgbanwe Igwe Uhie Okpomọkụ Uhie,Light Street Light Na-enweghị Ọkwọ ụgbọala
Home > Ngwaahịa > Uhie okporo ụzọ ọkụ > Mmiri windo na-adọkpụ ụgbọala > Ọhụụ ìhè LED nke 120W na-agba ọsọ
Ọhụụ ìhè LED nke 120W na-agba ọsọ
Ihe Nlereanya.: 120W LED Street Light
Ubu oke: 10000pcs/Quarter
RIYUEGUANGHUA Modular Driverless LED Street Light bụ ìhè ọhụrụ n'okporo ámá, ọ dịghị onye ọkwọ ụgbọala chọrọ, iji Seoul IC drive eme ihe, mmetụta dị ọkụ nke kachasị mma nwere ike inyere ndị ahịa aka ịchekwa ibu.
Ụzọ Street anyị nwere 10KV Nchebe Ntanya na IP ọkwa bụ IP65, nke nwere ike iji ike na mmiri ozuzo.
OsRAM LED Chip dị elu, ìhè ọkụ anyị nwere ike ịbịaru 130LM / W na ihe karịrị narị awa ise na narị ise.
Uzo Odi Mmiri Uhie eji eme ihe n'ubi, ebe obibi, Okporo Ụzọ, Okporo Okporo Ụzọ, ogige na injinia ndị ọzọ.
LED Qty 3030 192pcs
Ụlọ osisi aluminom niile maka ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-eme ka isi iyi ọkụ dị elu.
Nnukwu nkedo nrụgide, usoro site na eserese, siri ike ma na-emebi emebi.
Ngwunye Ultra Thin, dị mfe maka nchekwa, njem na mmezi.
Ụzọ 80W Mmiri Driverless Street
2, OSRAM 3030 elu CRI, na diode Zener, na nkwụsị agba bụ ihe na-erughị 3
3, nke na-abụghị nke stroboscopic
4, Seoul IC Drive usoro, afọ 5, ọkwọ ụgbọala, PF> 0.9
5, Ọ dịghị flicker
6, nwere ike ịrụ ọrụ na gburugburu ebe siri ike site n 'ogo 40 degrees ruo ogo 50
8, PC na-ekpo ọkụ ọkụ, ezigbo ọdịdị
9, Na-enwetaghị ájá na mmiri, dị mma maka n'èzí.
Ntị tupu ntinye
Biko jiri nlezianya gụọ ntụziaka ndị ọrụ tupu iji ngwaahịa.
Biko lelee ma ọ bụrụ na ike ọkọnọ ihe ndị a chọrọ. Voltage ọsọ ọsọ nke ngwaahịa bụ AC 85-305V.
Biko gbanyụọ ọkụ ahụ tupu etinye.
Ogige, ebe obibi, Okporo ụzọ, Ụzọ Awara Awara, Ogige, wdg.
Ngwaahịa : Uhie okporo ụzọ ọkụ > Mmiri windo na-adọkpụ ụgbọala
40W Ụlọ ọkụ na-enweghị ọkụ na-enweghị nkuzi nke ọkwọ ụgbọala Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ 40W Light Street Light na-adịghị ahụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
LightWead Light LED Street LightWindows 120W Kpọtụrụ ugbu a
20000lm 160W Light Street LED Street Driverless Kpọtụrụ ugbu a
80W Osram Module LED Street Light Kpọtụrụ ugbu a
Ụzọ 120W 125LM / W Ụzọ okporo ụzọ ìhè okporo ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
EC-RoHs 40W 80W 120W 160W LED Street Light Kpọtụrụ ugbu a
2018 Ihe Nlereanya Kachasị Ọhụrụ 80w LED Street Light Fixtures Kpọtụrụ ugbu a
Mgbanwe igwe di omimi nke ya Mgbanwe Igwe Uhie Okpomọkụ Uhie Light Street Light Na-enweghị Ọkwọ ụgbọala Mgbanwe Igwe Uhie Led Mbara Igwe Mmiri Iju Mmiri nke Gbara Ọkụ Mgbanwe Igwe na-agbanwe agbanwe na agba Mmiri mmiri mmiri nke 400W Mmiri Iju Mmiri nke Smd